Miteraka resabe eto an-toerana moa ity tranga ity satria ny vahoaka izay mahita ny ezaka ataon'ity Lehiben'ny Fonja ity nefa dia ho esoriny.
Ny Solom-bavambahoaka voafidy aty Antsohihy Atoa Rémi Jao Jean sy Rtoa Volahaingo Marie Thérèse voafidy tao Bealanana izay distrika hiasan'ity Fonja Antsohihy dia samy milaza fa ilaina ny fahamarinan-toeran'ny asa fanatsarana ny fonja, izay efa manomboka mivaingana sy hita maso, ka tsy mila potehina ny tsara efa natomboka.
Anisan'ny dingana lehibe ampiandraiketina an'ity Lehiben'ny fonja eto Antsohihy ihany koa ny ady amin'ny kolikoly, satria mila miverina ny fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana, mba hialana amin'ny fitsaram-bahoaka izay maro tato anatin'ny faritra Sofia.
Tsy eken'ny vahoaka intsony ny fahenoana fa misahirana ny Polisy sy Zandary manambotra dahalo sy mpangalatra ary mpamono olona, nefa avy eo votsotra hoazy, na misy gadra ahiahian'olona mivoaka mangina ny fonja.
Vao tsy ela akory, samy nahatadidy ny rehetra ilay dahalo tratran'ny fitsaram-bahoaka nisy namono teo alohan'ny vavahadin'ny fonja raha iny andeha aterin'ny Zandary tany ilay mpanao ratsy.
Ity talem-paritra ity moa dia fantatra fa hiala eto Antsohihy satria nangataka hiasa amin'ny toeran-kafa ary efa niasa teto nandritra ny 5 taona, ka izay handimby azy no tokony hanohy ny asa efa tsara natomboka fa tsy ny fametrahana kinamanamana.
Ny Ministera rahateo vaovao ka mino ny rehatra fa hitondra soa amin'ny Tontolon'ny Asa.
Mila Lehiben'ny Sampan-draharaha miasa tsara sy miady amin'ny kolikoly ny tompon'Andraikim-panjakana sy ny vahoaka aty an-toerana.